Ezopolitiko | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Bangaphi abantu abaswele ukufa kwiStalinist?
Bangaphi abantu abaswelekileyo ngenxa yengcinezelo kaStalin? bangaphi abantwana utata waseGeorgia wabantu baseSlavic apha ... Bonke batshabalala. Kwaye abo balapha yiPokémon yaseMars eqeshwe nguStalin. Ngokuqinisekileyo ukungabali ...
Kutheni uSaltyk Shchedrin wathi: Ukuba umntu waqala ukuthetha ngokuthanda izwe, ngoko ufuna ukuba?
Kutheni le nto uSaltyk Shchedrin wathi: Ukuba umntu uqala ukuthetha ngokuthanda izwe, ufuna ukweba? Ukuthand 'izwe sisidenge ezandleni zesela Eli gosa lalikrelekrele. Nini kwaye yeyiphi i-bureaucrat engaqinisekanga ...
Kuthetha ukuthini- I-fox fox?
Ithetha ntoni impungutye? I-fox ehlwempuzekileyo ayibulewanga kuphela, yanyibilikiswa, yafakwa inkunkuma, kodwa ngoku ilizwe liphela lihlekiswa ngaye Andazi kwaye ungabuzi i-wiki ...
Kutheni u-Putin utshintshe kangaka ngokubonakala?
Kutheni uPutin etshintshe kangaka ngaphandle? ubudala kwaye ujonge imifanekiso yakho…. I-erysipelas yaba banzi ukusuka kwisondlo esifanelekileyo, kodwa ibunzi lincinci. Ewe, ubuncinci into iyatshintsha eRashiya! IHedgehog icacile ...
Alaska. Ngubani na ongowasemthethweni?
IAlaska. Ngokabani na umthetho? IRASHIYA IMelika. Imbali kufuneka ifundiswe Amaqela ezizwe zaseSiberia awela i-isthmus (ngoku eyiBering Strait) kwiminyaka eli-1610 lamawaka eyadlulayo. AmaEskimo aqala ukuhlala kunxweme lweArctic, iAleuts ...
Inkqubo yesimo somhlaba. Kuthiwani ngoku oku kubhalwa njengempendulo yombuzo?
Ubume belizwe lobume. Yintoni enokubhalwa malunga noku ngohlobo lokuphendula umbuzo? Ndicinga ukuba ndifuna ukuthetha ngeendlela ezahlukeneyo zikarhulumente. Zintathu iintlobo zikarhulumente: umanyano, ...
I-ruble ikhuselekile njani? Idoli ikhuselekile njani?
I-ruble ixhaswa njani? Yintoni eyayixhasa idola? Akunzima igolide. Ukholo lomntu :). Inyaniso yokuba la maqhekeza ephepha axabisekile. Ayikho enye into. IFort Knox inovimba omkhulu wegolide, zingakanani ...
Ngubani ongqongqo? Yintoni ephosakeleyo? Kutheni ukugqithisela kubonakala ngokugqithisi?
Ngubani ozibaxiweyo? Kukuthini ukuzibaxa izinto? Kutheni le nto ukuzibaxa izinto kulinganiswa nobunqolobi? Ndiza kuphendula ngokulandelelana. Ngubani ozibaxiweyo? U-extremist unamathela kwiimbono ezigqithisileyo kunye nezenzo kwezopolitiko okanye kubomi boluntu, kwaye njani ...
Ukufuna ngokukhawuleza amazwe ase-Confederate, imizekelo ye-10pcs, nceda uncede.
Sifuna ngokungxamisekileyo i-Confederate States, imizekelo yamaqhekeza ali-10, nceda uncede. yiSwitzerland kuphela kwaye oko kukhethwe. IJamani, iFrance, i-Itali, iSwitzerland, iSpain, iRussia, i-China, i-Indiya, i-Canada, i-USA i-Confederation kungoku nje yi-Union State ...
Iyintoni imbangela yokulwa phakathi kwamaSirayeli kunye nePalestine?
Yintoni unobangela wengxabano phakathi kukaSirayeli nePalestine? NguThixo kuphela owaziyo) Ungquzulwano lakwa-Israyeli-nePalestine lunembali ende kakhulu eyaqala kumaxesha okubhalwa kweBhayibhile. Ingingqi ekuyo i-Israel yanamhlanje ...
ungababiza njani abantu abaphula ingoma "Unbekannter soldat" liqela "Sleipnir"?
ungababiza njani abantu abaphula ingoma "Unbekannter soldat" liqela "Sleipnir"? Ewe oku kusebenza ngakumbi kumajoni ethu. Ingoma imalunga nejoni njengoko likwisihloko, malunga nejoni-indoda ukuba ...
Ngubani onguGeneral Yermolov? Wenzani, yintoni eyaziwayo? Ngakumbi ngeenkcukacha!
Ngubani na Jikelele Ermolov? Wenze ntoni, yintoni edume ngayo? Iinkcukacha ezithe kratya! balwa eCaucasus ... ngendlela ngempumelelo ... wabamba uShamamil ... iqhawe laseRussia ... emva koko amaRashiya avuzwa. UAnya Chechenov ... Ewe, ndiyakhumbula, minyaka le ...
Yintoni uSaddam Hussein ayenzela yona?
Kwakutheni ukuze abulawe uSaddam Hussein? Ukungabi yi-pindosya slut. Ngokuyalela ukubulala umntu ngamnye. Kumyalelo wokutyhefa abemi baseIraq ngeegesi zemfazwe, ezibandakanya ...
Madoda aseUkraine ... kwaye ngoobani "uSvidomo" kwaye bazukisa njani ?? liguqulelwa njani eli gama ???
Madoda aseUkraine ... kwaye ngoobani "uSvidomo" kwaye bazukisa njani ?? liguqulelwa njani eli gama ??? Namhlanje eli gama linentsingiselo eyahlukileyo ... Ke ngoku yintoni intsingiselo ka "Svidomo" okwangoku? Isvdomy ...
Uthini umahluko phakathi kwe-llama kunye ne-alpaca?
Nguwuphi umahluko phakathi kweLlama neAlpaca? I-llama iphakanyisiwe kangangeenkulungwane eMzantsi Melika njengenkomo yomthwalo, kwaye ii-alpaca ziphakanyiselwe iimpawu ezixabisekileyo zoboya bayo. La # 769; ma (Lama glama) esanyisayo eMzantsi Melika ...
Ubani kunye noburhulumente baseRashiya bakha njani na?
Ngubani kwaye wenziwa njani urhulumente waseRussia? Sinyula uSihlalo kaRhulumente wase-Russian Federation nguMongameli we-Russian Federation ngendlela emiselwe nguMgaqo-siseko we-Russian Federation. OoSekela-Nkulumbuso be-Russian Federation kunye nabaphathiswa baseburhulumenteni bayonyulwa ...
Ngaba iriphabhlikhi yaseTatarstan iRussia?
Ngaba iriphabhlikhi yaseTatarstan iRussia? Omnye wemimandla yaseRussia, ebizwa ngokuba yiriphabliki yecors Ewe, isiphunzi sicacile I-FEDERATIVE STATE (ukusuka kumanyano lwesiLatin "federatio") umanyano lwamazwe amabini okanye nangaphezulu (okanye kuzwelonke) ...
Ngubani okhuphayo, indlela yokuchonga xa i-deerter iyancomeka?
Ngubani umphambukeli, indlela yokujonga ukuba ngubani owonileyo? ukuba ubaleka kule yunithi, ungumphangi kwaye oku kuyancomeka! =) Kwaye ukuba ubuya edabini kwaye waphosa amaqabane kwi ...
Uhlahlo-lwabiwo mali lukarhulumente
Uhlahlo-lwabiwo mali lukarhulumente luhlahlo-lwabiwo mali lukaRhulumente ubudlelwane bezomnotho phakathi kukarhulumente kunye nezifundo zazo zonke iintlobo zobunini kunye nommi ngamnye malunga nokwenziwa kwengxowa-mali esembindini eyabelwe ukuphumeza ...
Ngaphantsi kweyiphi imeko iPoland yaphuma kunye nokwakhiwa kolawulo lwaseRussia?
Phantsi kwaziphi iimeko apho iPoland yaba yinxalenye yoBukhosi baseRussia? Ummelwane wam epasejini uhlala eqala ingxabano Endiya kujolisa kuyo nonke. Xa sasithatha iWarsaw, nanikwizirhweyisi ngoko ...
Imibuzo ye-55 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-3,190.